रक्ताल्पता (रगत को कमी /Anemia) - निरोगी नेपाल मा स्वागत छ निरोगी नेपाल मा स्वागत छ
रक्ताल्पता (रगत को कमी /Anemia)
हाम्रो शरीर मा हेमोग्लोबिन को स्तर (मात्रा) घटेको अवस्था लाई रक्ताल्पता भएको मानिन्छ । हेमोग्लोबिन भनेको राता रक्तकोष मा पाइने एक तेस्तो अवयव हो जसले रगत मा अक्सिजन बोकेर हिँड्ने काम गर्छ । यदि शरीर मा हेमोग्लोबिन को मात्रा घट्यो भने रगत को अक्सिजन बोकेर हिँड्ने क्षमता पनि घट्छ । फलस्वरुप शरीर लाई चाहिने अक्सिजन को यथेष्ट मात्रा मा आपूर्ति हुन सक्दैन । अक्सिजन को आपूर्ति मा कमी आउनासाथ शरीर भित्र हुने कतिपय रासायनिक प्रतिक्रियाहरु प्रभावित हुन्छन् र शरीर ले चाहिए जति शक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन । रक्ताल्पता हुनु आँफैमा एक रोग नभएर शरीर भित्र भएका अन्य रोग को संकेत पनि हो ।
थकान र कमजोरी महसुस हुनु
श्वासप्रश्वास छिटो हुनु
छाला को रंग हलुका पहेंलो देखिनु
चक्कर आउनु र छटपटी हुनु
मुटु को धडकन बढ्नु, धडकन मा असन्तुलन आउनु
निम्नलिखित कारणहरु ले शरीर मा रक्ताल्पता हुन सक्छ-
१. यदि शरीर ले आवश्यक मात्रा मा हेमोग्लोबिन अथवा राता रक्तकोष बनाउन सकेन भने : यसो हुनुका पछाडी निम्नलिखित कारणहरु हुन सक्छन्-
खानेकुरा मा फलाम तत्त्व को कमी भएमा : किनकि हेमोग्लोबिन उत्पादन गर्न फलाम को आवश्यकता पर्दछ । गर्भावस्था का बेला, बच्चा लाई दूध खुवाउने अवस्था मा तथा पटक पटक रक्तदान गरेको अवस्था मा शरीर मा संचित फलाम मा कमी आउन सक्छ।
राता रक्तकोष बनाउन आवश्यक भिटामिन को कमी भएमा : पूर्ण रुप ले शाकाहारी भोजन गर्नेहरु ले भिटामिन बी १२ प्राप्त गर्न नसक्ने हुनाले अतिरिक्त रुप मा सो भिटामिन लिनु पर्ने हुन्छ । फोलेट पाइने हरिया सागसब्जी, फलपूmल कम खानाले शरीर मा फोलेट को कमी हुन सक्छ ।
आन्द्रा मा हुने सेलियाक जस्ता रोग का कारण पनि आन्द्रा ले यथेष्ट मात्रा मा पोषक तत्व शोषण गर्न सक्दैन ।
राता रक्तकोष बनाउन का लागि आवश्यक एरिथ्रोपोइटिन नामक हर्मोन को कमी भएमा : मिर्गौला सम्बन्धी पुरानो रोग र क्यान्सर तथा केमोथेरापी का कारण शरीर मा एरिथ्रोपोइटिन नामक हर्मोन मा कमी आउँछ ।
लीड को दुष्प्रभाव : रगत मा लीड (एक प्रकार को धातु) को मात्रा बढी भएमा तेसले हाड भित्र को मासी लाई दुष्प्रभावित गरी राता रक्तकण को उत्पादन मा कमी ल्याउँछ ।
२. बनेका राता रक्तकोषहरु असमय मै नष्ट भए भने : यसो हुनुका पछाडी निम्नलिखित कारण हुन सक्छन्-
संक्रमण : सेप्टिसेमिया, एचआईभी, मलेरिया, कालाजार जस्ता रोगहरु मा राता रक्तकण को क्षति हुने गर्छ ।
यदि बनेका राता रक्तकण पनि अपूर्ण खाल का वा दोषयुक्त छन् भने तिनलाई हाम्रै शरीर ले नष्ट गर्ने व्यवस्था छ । यदि स्फेरोसाइटोसिस, ग्लुकोज ६–फोस्फेट डिहाइड्रोजिनेज (G6PD) को कमी भयो भने वा थालासेमिया र सिकल सेल एनिमिया भयो भने दोषयुक्त राता रक्तकण बन्ने सम्भावना हुन्छ ।
केही अवस्था मा स्व–प्रतिरोध शक्ति ले एन्टीबडी को सहारा मा राता रक्तकण माथी आक्रमण गर्ने समस्या पनि देखा पर्न सक्छ ।
३. शरीर बाट रगत को क्षय हुने पुराना समस्या मा पनि हेमोग्लोबिन को स्तर मा कमी आउँछ । यसमा तलका कारणहरु हुने सम्भावना हुन्छ-
रगत बग्ने पुराना घाऊहरु
पुरानो पायल्स को रोग
पाचन नली सँग सम्बन्धित वा अन्य प्रकार का रगत को हानि हुने रोगहरु मा
महिनाबारी का बेला अत्यधिक रक्तस्राव भएमा
लामो समय देखि एस्पिरिन, इबुप्रोफेन जस्ता अम्ल वृद्धि गरी आन्द्रा मा घाउ पार्ने खालका स्टेर्वाइड रहित औषधि को प्रयोग गरेमा
अंकुशे जुका जस्ता परजीवीहरु को प्रकोप भएमा
रगत मा भएको हेमोग्लोबिन को मात्रा परीक्षण गरेर शरीर मा रक्ताल्पता भए नभएको पत्ता लगाइन्छ । यदि तपाईं मा सामान्य खाल को रक्ताल्पता भएको छ भने कुनै विशेष लक्षण देखिँदैनन् । तर रक्ताल्पता का लक्षण देखिएको अवस्था मा तेसमा निहित कारण पत्ता लगाउन का लागि रगत काे विभिन्न परीक्षण का साथै इण्डोस्कोपी वा हाड को मासी को बायोप्सी परीक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ । विकासोन्मुख मुलुकहरु मा रक्ताल्पता को मुख्य कारण भनेको अंकुशे जुका को प्रकोप हो । यसका लागि दिसा जाँच गर्नु पर्ने हुन्छ ।
सामान्यतया, रक्ताल्पता का पछाडी रहेको कारण पत्ता लगाएर सो को उपचार गर्नाले रक्ताल्पता को समस्या स्वतः समाप्त भएर जान्छ ।
फलाम, भिटामिन बी १२ र फोलिक एसिड को कमी का कारण ले भएको रक्ताल्पता लाई पोषिला खानेकुरा खाएर एवं फलाम तथा भिटामिन युक्त गोली को सेवन गरेर वा सूई लगाएर सो को पूर्ति गर्न सकिन्छ ।
फलाम धेरै भएका खानेकुरा : रातो मासु, सिमी, हरिया सागसब्जीहरु
पेप्टिक अल्सर का कारण रक्तस्राव भएर रक्ताल्पता भएको हो भने सो पेप्टिक अल्सर को उपचार पछि सो समस्या स्वतः हराएर जान्छ ।
महिला मा महिनाबारी को गडबडी का कारण धेरै दिन सम्म लगातार रगत गइरहेमा हर्मोन को उपचार द्वारा रगत जाने समस्या लाई रोक्न सकिन्छ ।
अंकुशे जुका का कारण पनि रक्ताल्पता हुने भएकाले यदि दिसा जाँच मा अंकुशे जुका देखिएको भए अंकुशे जुका को उपचार गर्नु पर्दछ ।
यदि रक्ताल्पता को समस्या अत्यन्त गम्भीर अवस्था मा पुगेको छ भने तेसले छाती दुख्ने, श्वासप्रश्वास मा तिब्रता ल्याउने, रिँगटा लागेको अनुभव गराउने आदि हुन्छ । तेस्तोमा तत्कालै चिकित्सक को सल्लाह लिई रगत चढाउनु पर्ने हुन सक्छ ।
यद्यपि अरु रोगहरु को जाँच गर्दा पनि रक्त परीक्षण गर्ने गरिन्छ र हेमोग्लोबिन को स्तर पत्ता लगाइन्छ । तर यदि कुनै स्पष्ट कारण विना सामान्य अवस्था मा थकान को अनुभव हुन्छ र लामो समय सम्म कमजोरी रहिरहन्छ भने डाक्टर लाई भेट्नु जरुरी हुन्छ । शरीर मा रक्ताल्पता भएका कारण ले त्यस्तो अवस्था भएको हुन सक्छ ।